काठमाडौं जेठ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अद्यावधिक निर्वाचन नै हो । निश्चित समय अवधिमा हुने निर्वाचन र यसबाट आउने परिणामले लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको हुन्छ । राजनीतिमा युवाको...
बैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा हुन गईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले देश यतिखेर निर्वाचनमय भएको छ । कतै गठबन्धन त कतै एकल मित्रबस् तबरले प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन लड्न विभिन्न दलहरुले उम्मेद्वारी दिएक...
देशमा यतिखेर बैशाख ३० गते एकै चरणमा हुने स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । २०७४ सालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन स्वरूप नयाँ संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि तीन चरणमा नि...
पुन लोडसेडिङ ?
काठमाडौं चैत । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पुन लोडसेडिङ सुरु भएको छ । बर्खायाममा स्वदेशमा नै उत्पादन भएको विद्युतले माग धान्ने सकेपनि हिउँदमा भने हालसम्म भारत कै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका अधि...
स्थानिय तहको निर्वाचनः आर्थिक प्रलोभन र निर्वाचन आयोगको नजिर
काठमाडौं चैत । सरकारले आउदो बैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यतिखेर निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटेको छ भने गाउँ गाउँमा चुनावको माहोल बन्दै गएको छ । मुलुकभरका ७५...
ठोस अभियानको अपरिर्हायता
काठमाडौ, २६ फागुन । प्रायः महिनापिच्छे एउटा घटनाले नेपाललाई गिज्याई रहेको हुन्छ त्यो हो आगलागीको दुरदशा । ग्रामिण भेग तथा वन जङगलमा हुने आगलागी भन्दा शहरी क्षेत्रमा हुने आगलागीको घटनाले भयानक अवस्थ...
राष्ट्र निर्माणमा किन फरक मत ?
काठमाडौ फागुन । देशमा हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सहज र सबल सुनिश्चितता लगायतका काम चाहिँ आम नागरिकका अपेक्षा हुन । नेपा...
घरको भान्सा देखि सरकारी खर्च बढायो काठमाडाै‌ माघ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समय स...
समयमा नै स्थानीय निर्वाचन आवश्यकता
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदैछ । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर...
विकराल समस्याको संकेत !
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बर्खायाममा विद्युत खपतको विषय केही वर्ष यता ठाउँको दुखाईको विषय बन्दै गएको छ । सुख्खायाममा उत्पादन धेरै भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने...
लकडाउनको विकल्प ?
पछिल्लो केही दिनमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको संख्या उकालो लागेपछि सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च भएमा फेरी लकडाउन गर्ने संकेत गरेको छ । कोरोना संक्रमण बढ्दो गतिमा रहे...
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्यामा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा जुन दरमा संक्रमितहरू बढेका छन्, यसलाई तेस्रो लहरका रूपमा लिन...
शासकहरुको स्वार्थले अनिश्चित बन्दै बुढीगण्डकी
देशको हितमा काम गर्ने अठोट गरी सत्तामा पुग्नेहरू देशको हित भन्दा अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिँदा देशले नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्छ । देशको हितभन्दा अरू नै विषयलाई प्राथमिकता दिँदा निस्कने परिणामको एउटा...
समयमा नै समाधान खोज्ने की ?
प्रायः जाडो मौसममा विद्युत खपत तुलनात्मक रुपमा बढ्ने गर्दछ । बजार क्षेत्रमा मानिसहरु धेरै व्यस्तता हुने भएकै कारण घर होस् या अफिस आफु जाडोबाट जोगिन बजारमा पाईने विभिन्न प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहर...
सरकारको कदमले सार्थकता उन्मुख
कुनै समय थियो स्वदेशको उत्पादित विद्युतले माग धान्न नसक्दा आम नागरिक घण्टौ लोडसेडिङको मारमा थिए । अहिलेको अवस्था पहिलेको भन्दा ठीक फरक छ । अहिलेको अवस्था बर्खायाममा उत्पादित विद्युत खपत गराउन नेपाल...